Banyere Anyị - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Anyị ga-echekwa nchekwa gị n'ụzọ
KTG Auto na-elekwasị anya n'inye breeki calipers ihe dị ka afọ 10 na mgbe niile n'ọdịnihu.Anyị bụ ndị ọkachamara na-ebubata breeki caliper dị na Shanghai.Anyị nwere ihe karịrị ọnụọgụ OE 3,000 maka breeki calipers na katalọgụ anyị, ma na-aga n'ihu na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ nwere ọnụọgụ OE karịrị 200 kwa afọ.Anyị na-enyekwa OEM/ODM ọrụ ndabere na ihe achọrọ.Anyị bụ ọkachamara n'ịzụlite na imepụta calipers breeki ụgbọ ala, ụgbọala na-adọkpụ breeki calipers, EPB, ngwa nrụzi breeki caliper, akụkụ diski breeki gụnyere piston, actuator, breeki rọba, na ndị ọzọ.
Anyị na-agba mbọ ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya kacha mma.
Site na ụlọ ọrụ anyị tọrọ ntọala, KTG Auto na-elekwasị anya mgbe niile na ahịa ahịa na North America & Europe.N'elu ndị magburu onwe arụmọrụ-ọnụahịa ruru, anyị na ngwaahịa na-ewu ewu na US, Canada, Germany, UK, France, Italy, Netherland, Spain, Denmark, Belarus, wdg Anyị caliper ngwaahịa bụ maka njem ụgbọ ala, azụmahịa ugbo ala, trailers, Ụgbọ ala ugbo, wdg N'otu oge ahụ, ngwaahịa anyị na-ekpuchi ụdị ụgbọ ala dị iche iche, gụnyere Ford, GM, Das Auto, BMW, MAZDA, MERCEDES-BENZ, LAND ROVER, Volvo, TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN, HYUNDAI, KAI, wdg. .
Anyị ji obi ụtọ na-anabata nleta gị mgbe niile, anyị na-achọkwa ka gị na gị nwee mmekọrịta ogologo oge n'ọdịnihu.
Osisi anyị nwere igwe niile gụnyere CNC, igwe igwe igwe wdg. Nyocha, Ngwa nhazi nhazi 3D, wdg.
Anyị na-etinyekarị mkpa maka mmepe ngwaahịa ọhụrụ na nyocha.Anyị ga-aga n'ihu na-emepe akụkụ ọnụọgụ ndị ama ama, wee gbasaa ahịa anyị na mkpuchi zuru oke, dabara maka ahịa dị iche iche n'ụwa niile.Anyị na-anya isi otu ụlọ ọrụ dị elu na-arụ ọrụ nke ọma, nwere akụrụngwa nnwale mmepụta dị elu yana sistemụ njikwa ogo siri ike.Ka ọ dị ugbu a, nkwalite teknụzụ anyị na-aga n'ihu, njikwa sayensị mara mma, ịdị mma ngwaahịa na-aga n'ihu na ọrụ ire ere zuru oke na-eme ka ngwaahịa anyị nwee ekele n'ụlọ na mba ọzọ.
Kedu ihe anyị nwere ike ijere gị ozi?
♦ Ngwaahịa nwere ezigbo mma, ma nọgide na-eme ka mma dị mma.
♦ Ngwaahịa na ọnụahịa asọmpi.
♦ Ike mmepe ngwaahịa ọhụrụ ngwa ngwa.
♦ Mgbanwe MOQ na-agbanwe agbanwe na onye ọrụ enyi na enyi, dị mma maka ndị ahịa ịzụta obere iwu n'oge mmalite.
♦ nnyefe kwụsiri ike.
Q1.Afọ ole ka ụlọ ọrụ gị nwere ọpụrụiche na akụkụ breeki ụgbọ ala?
A: Ihe dị ka afọ iri.
Q2.Kedu ngwaahịa bụ isi ụlọ ọrụ gị?
A: Isi ngwaahịa anyị bụ breeki calipers, akụkụ breeki ụgbọala na-adọkpụ.Anyị ga-emepụta ahịrị ngwaahịa ọhụrụ n'ọdịnihu.
Q3.Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ njikọta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-ere ahịa akpaaka.Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa ngwaahịa ndị ọzọ.
Q4.Kedu ihe bụ MOQ?
A: Ọtụtụ mgbe anyị MOQ bụ 50 ma ọ bụ 100pcs / nlereanya.Mana ọ bụrụ na enwere ngwaahịa, MOQ agaghị amachibido.
Q5.Ogologo oge ole ka usoro mmepụta nke ngwaahịa gị dị?
A: Ọtụtụ mgbe, ọ na-ewe ihe dị ka 60days, mana anyị na-akwadebe ngwa ahịa nke ngwaahịa emechara ma ọ bụ ngwaahịa emechara nke ọma maka ngwaahịa mgbe niile.
Q6.Kedu ụdị nkwakọ ngwaahịa ị nwere?
A: Mkpokọta nọpụ iche ma ọ bụ nkwakọ ahaziri ahazi.
Q7.Ị nwere ike ịnye ihe atụ efu?
A: Ọ dabere na ụgwọ nlele, mana anyị anaghị akwụ ụgwọ ibu ibu.
Q8.Ị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa gị?
A: Ee, anyị nwere.Anyị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa oge niile ma na-emelite ozi ngwaahịa anyị mgbe niile na webụsaịtị.
Q9.Ị nwere ike ịmepụta ihe ọhụrụ dịka nlele ahụ?
A: Ee, anyị nwere ike.Ma anyị na-ahapụkwa ozi mmepe ngwaahịa ọhụrụ anyị mgbe niile na webụsaịtị.
Q10.Kedu ahịa ahịa anyị bụ isi?
A: Isi ahịa anyị bụ North America, South America, Europe, na Asia.
Ihe niile anyị na-eme bụ ijere gị ozi nke ọma.
Caliper eburu ọkara Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Teal breeki Calipers Caliper Saab Caliper edoziri Jak Brake Caliper